Maxay yihiin meelaha ugu duufaanta badan adduunka? | Saadaasha Shabakadda
Dhacdooyinka duufaanta waxaa loogu talagalay kuwa naga mid ah oo jecel inay arkaan hillaac oo ay maqlaan onkodka, iyo sidoo kale daruuraha Cumulonimbus ee ku soo dhowaanaya markay soo baxayaan, qaar ka mid ah kuwa ugu cajaa'ibka badan dhammaan dhacdooyinka.
Nasiib darrose, si la mid ah sidaan oo kale marna roob ugu da'in qof walba siduu u jecel yahay, waxaa jira kuwa ku raaxeysan kara dhacdooyinkan inbadan. Waa kuwa ku nool meelaha duufaanta leh ee adduunka.
1 Hillaaca Catatumbo (Maracaibo Lake, Venezuela)
2 Bogor (Jasiiradda Java, Indooniisiya)
Hillaaca Catatumbo (Maracaibo Lake, Venezuela)
Magaaladaan oo ku taal waqooyi-galbeed ee Venezuela, inta u dhexeysa Wabiga Catatumbo iyo Harada Maracaibo, dhacdo aan caadi aheyn oo loo yaqaan hillaaca Catatumbo ayaa ka dhacda. Waxay ku samaysantaa daruuraha horumarka toosan ee weyn ee u dhexeeya 1 iyo ku dhowaad 4 km sare.
Waad ku raaxeysan kartaa bandhigyadan illaa 260 jeer sanadkii, iyo ilaa 10am habeen kaliya. Intaa waxaa dheer, waxay gaari kartaa lixdan soo dejin daqiiqadii.
Bogor (Jasiiradda Java, Indooniisiya)
Tani waa magaalo ku taal meel u dhow volcano weyn, oo ku taal jasiiradda Java, ee Indonesia. Halkan waa laga yaabaa 322 maalmood oo duufaan ah sanad walba. Inkasta oo badankood ay ka dhacaan fulkaanaha, haddii aan raadineyno meel duufaan leh, taasi waa Bogor. Waxaa jira duufaanno maalin kasta!
Qeybtaan adduunka ka mid ah, gaar ahaan magaalada Bunia (Jamhuuriyadda Koongo), degganayaashu way arki karaan ilaa 228 duufaanno sanadkiiba. Ma ahan sida ugu badan ee Bogor, laakiin waa wax badan oo ka badan waxa aan ku arki karno Isbaanishka oo u dhexeeya 10 iyo 40 maalmood, iyadoo kuxiran aagga aan joogno.
Magaalada Lakeland, oo ku taal Florida (Mareykanka), marka lagu daro lahaanshaha muuqaal aad u qurux badan, waxay ku faani karaan 130 maalmood toementa sanadka.
Marka hadda waad ogtahay, haddii aad ka fekereyso inaad meelo yar oo qurux badan aad meel ku dhigato, booqo mid ka mid ah kuwaan soo sheegay hubaal waxaad waqti fiican ku heli doontaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Maxay yihiin meelaha ugu duufaanta badan adduunka?